Su’aal: Waa maxay macnaha inaad ciise u oggolaatid in noqdo badbaaiyahaaga gaarka ah?
Jawaab: Ma oggolaatay inuu ciise noqdo badbaadiyahaaga gaarka ah? Si aad si sax ah su’aasha ugu fahamtid, waa inaad marka hore fahamtaa kalmadaha: Ciise masiixi, Gaar, iyo Badbaadiye.
Iilaahow waan ogahay inaan danbi kaa galay oon ciqaab mudanahay, laakiin waxaan aaminsanahay inuu ciise masiixi qaatay ciqaabtaan mudnaaa, rumeyntayda darteednna laygu cafiyo. Waxaan helaa cafis dalabkaaga, waana ku aaminey sii la ii baadbaadiyo. Waxaan aqbalay inuu ciise noqdo badbaadiyahayga gaarka ah. Waad ku mahadad santahay sarreyntaada cajiibka ah iyo cafis kaaga- hadiyada nolol aakhiro abida…. Aamiin.